Mpanamboatra sy mpamatsy teknika resina synthetic China Jiaxing
Ny taila vita amin'ny sentetika PVC dia vita amin'ny resina polyvinyl chloride (fohy ho an'ny PVC). Nanampy ny UV anti-ultraviolet agents sy ny akora simika hafa,
Taorian'ny fampifandraisana ara-tsiansa, Namboarina tamin'ny haitao mandroso. Ny paingotra resin synthetic PVC dia mampiasa teknolojia fitambarana multi-layer co-extrusion, Manarona ny velaran'ny vokatra misy sosona manohitra fahanterana, manatsara ny fanoherana ny toetr'andro sy ny faharetan'ny loko. Ny resina PVC dia manana fanoherana afo tsara, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny toetr'andro ary tsy misy asbestos. loko mazava, fiarovana ny tontolo iainana sy fahasalamana, noho izany dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fananganana izy io, na izany aza, ny taila vita amin'ny resin synthetic PVC dia misy ireto olana manaraka ireto: Voalohany, na dia ny tile vita amin'ny resin synthetic PVC aza manana fanoherana famatrarana tsara kokoa, Fa amin'ny fizotry ny fitaterana na ny fametrahana azy dia lava ny zavatra mavesatra mandritra ny fotoana lava, mora ny manova endrika sy tsy misy fitaovana fanentanana taitra; Ny faharoa dia rehefa apetraka ny taila vita amin'ny resin synthetic PVC.
Ny rindrina anatiny matetika dia tsy afaka mifanakaiky amin'ny tranobe, mora ny mamorona elanelana misy eo amin'ny taila vita amin'ny resinika vita amin'ny tazomoka PVC sy ilay trano, izay misy fiantraikany amin'ny vokadratsin'ny fampiasana.
Ny zavatra noforonina dia manambara ny taila vita amin'ny resin synthetic PVC, izay misy vatan-kazo vita amin'ny resin-synthetic, akorandriaka ambony ary akorandriaka ambany, ny akorandriaka ambony dia voalahatra eo ambonin'ny vatan'ny vatan-kazo vita amin'ny sentetika. ny tile resin sentetika, misy lalantsara tsy misy feony misokatra eo anelanelan'ny akorany ambany sy ny vatan'ny vatan-kazo resin sentetika, eo am-pototry ny vodin-damosina ny lohataona iray mifono taitra, ny atin'ny vatan'ny ny kapila resina sentetika dia feno resina polyvinyl chloride, tarika trapezoid dia mifandray amin'ny tendrony ambony amin'ny akorany ambony, ny resa sentetika ASA dia voalamina eo anelanelan'ny akorany ambony sy ny vatan'ny vatan-kazo resin sentetika. Ny famoronana dia mamaha ny olana ny tile resin synthetic PVC efa ela dia voahitsaky ny zavatra mavesatra nandritra ny fotoana ela. Mirona ho mora simba izy io, tsy misy mpitroka hatairana, ary koa, ny rindrina anatiny misy ny taila vita amin'ny resin synthetic PVC dia matetika afaka tsy mifanakaiky amin'ny tranobe. Ny olan'ny fananganana banga mora.